Lumina 1.2, iro risingaremi desktop kubva kuBSD, rave kuwanikwa | Linux Vakapindwa muropa
Lumina 1.2, iro risingaremi desktop kubva kuBSD, rave kuwanikwa
Kutanga kwegore hakuna kungotiunzira mapurojekiti nyowani asiwo shanduro nyowani dzinozivikanwa uye kwete anozivikanwa zvakanyanya madhesiki, zvirongwa uye kunyorera. Mune ino kesi ini ndichataura nezvazvo chiedza, desktop isina huremu yakangosvika paGnu / Linux uye izvo ichangoburitswa Lumina 1.2, isingaremi vhezheni.
Lumina 1.2 ishanduro ine mashoma shanduko asi izvi zvinonyanya kukosha uye zvinoita kuti desktop ive yakajeka uye nekukurumidza, zvakanyanya kana kupfuura sematafura ekare emwenje ayo anoshandiswa muGnu / Linux.
Lumina 1.2 inokutendera iwe kuve nechitarisiko chechero desktop uye inoshanda system pamusika
Lumina akaberekwa ari desktop yedhisheni yeBSD asi nekukurumidza inouya kuLinux seimwe nzira yeLXQT kana Xfce. Lumina 1.1 ichiri iine zvimwe zvikanganiso zvichienzaniswa nemamwe madhesiki akaita se KDE kana Gnome, asi yainyatsoshanda. Mune vhezheni nyowani, muLumina 1.2, iyo desktop haina kuwedzera akawanda matsva mabasa, pane kudaro, inobvisa maraibhurari asingabatsiri uye zvirongwa zvinoita kuti iyo vhezheni itsva ikurumidze uye kureruka kupfuura mushanduro dzakapfuura.
Uyezve, iye mugadziri, Ken Moore, anoti izvo Iyi vhezheni nyowani inokutendera iwe kuve nechitarisiko cheakakurumbira desktops uye anoshanda masisitimu ane akati wandei kudzvanya. Ndokunge, nekudzvanya kaviri tinogona kuve nechitarisiko cheMac OS, Windows, KDE, Xfce, Gnome, nezvimwe ...
Hatina kukwanisa kuongorora izvi kubvira Lumina 1.2 ichauya munguva pfupi iri kuuya kuGnu / Linux kugoverwa, panguva ino inongowanikwa chete kugoverwa kweBSD.
Lumina 1.2 idesktop rakakura, zvirinani vashoma vasingadi vashandisi uye avo vane mashoma-zviwanikwa makomputaZvimiro zviri kuwedzera kukumbirwa nevashandisi uye nekudaro kubudirira kwayo kune mwero. Zvisinei Iwe unofungei nezve iri tafura? Iwe unofunga kuti Lumina 1.2 ndeyechokwadi inokurumidza uye yakajeka desktop?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » Lumina 1.2, iro risingaremi desktop kubva kuBSD, rave kuwanikwa
hazvina kushata ndinofungidzira ivo vakafanogadzirirwa masitaera
Ruzivo nezve kuisirwa lumina zvese mu openuse uye mu ubuntu kana arch zvingave zvakanaka
Linux Mint 18.1 Xfce Edition yatove neyayo yekutanga beta beta
Solus 2017.01.01, yekutanga Solus ISO kubva payakaburitswa kuburitswa